Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Tab kwi-Android 4.0 kunye neCyanogenMod 9 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwisifundo sangaphambili, ndikufundisile uyifaka njani i-stock firmware kwi-Samsung Galaxy Tab 7 ″ kuba kamva faka iClockworkMod Ukubuyisela.
Namhlanje usebenzisa ithuba lokufundisa kwaye ufakelo lwamva nje lweNgxelo ehlaziyiweyo, Ndiza kuthatha ithuba lokukufundisa uyifaka njani i-rom yeCyanogenMod 9, eziza kusihlaziya I-Samsung Galaxy Tab 7 ″ kuhlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza Uphando, Ayikho enye into ngaphandle kwe Ice Cream Sandwich okanye i-Android 4.0.4.
I-rom ekhethelwe le njongo yaziwa njenge Ngobusuku bakha kwiqela leCyanogenMod 9, yodumo Iqela labaphuhlisi abazimeleyo eSamsung ezisinika zona, enkosi kuphando lwazo kunye nomzamo, uhlaziyo olwenziweyo ngokwazo I-Samsung ayixhaswanga kwesi sixhobo.
Ngokuqinisekileyo yonke into iyasebenza kwirom, nangaphezulu, inqanaba lakho Ubumdaka kunye nozinzo bugqithisile kuguqulelo oluphambili lweGingerbread, oku kubonisa ukuba ezi ntlobo ze Samsung Ayisiyo eyomsebenzi wokuxhasa abathengi kwaye ekuphela kwento abayikhathaleleyo kukugcwalisa iipokotho zabo ngentengiso yeetheminali ezintsha, Ukushiya bucala iitheminali, ezinokuthi ngoku zingaphantsi kancinci zikwazi ukwamkela uhlaziyo olutsha.
Eyona nto indothusileyo yile Imvakalelo yothando evela kwiCyanogenMod 9Lixesha lebhetri yalo, kwaye ukuba awundikholelwa, zikhangele ngokwakho kwisikrini endikuncamathisayo kunye nobude besixhobo sam ngokusetyenziswa kwesiqhelo.
Le rom yeyomzekelo we I-Samsung Galaxy Tab 7 ″, kakhulu GSM njengaye CDMA.
Ukuba inguqulelo yakho I-GSM, kuya kufuneka ukhuphele i-rom kwikhonkco elilandelayo, kwaye ukuba inguqulelo yakho yile I-CDMA izakukhuphela apha.
Emva koko siya kukhuphela usetyenziso lwendalo lukaGoogle okanye iGapps kule ikhonkco.
Nje ukuba iifayile ezimbini ze-zip zikhutshelwe, Siza kuzikopa ngaphandle kokucinezela kwi-sdcard ye-Samsung Galaxy Tab 7 ″ kunye Siza kuqala kwimowudi yokubuyisela, kuba isuka kuye, ukuba siza kukhanyisa le rom imnandi.
Sele ivela imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo Siza kulandela la manyathelo alula:
Buyela umva ukubuyela umva
Ukunyuka kunye nokugcinwa kunye nefomathi yenkqubo
Khetha i-zip kwi-sdcard kwaye ufake i-Gapps zip
Sula isahlulelo se-cache kwaye usule i-dalvik cache.
Ukuba Icwecwe liziphinda kwakhona emva kokuba ifakiwe i-rom, ubuyela ku qala kwakhona kwimowudi yokubuyisela kwaye ufake iiGapps ukusuka kwinyathelo 10.
Ngoku njengokuba ubona kwisikrini esingentla esiza kuba naso i-Samsung Galaxy Tab 7 ″ okanye i-p-1000, ihlaziyiwe kuhlobo lwamva nje lwe-Android, i-4.0.4 okanye i-Ice Cream Sandwich.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Indlela yokuqalisa kunye nokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwi-Samsung Galaxy tab p1000
Khuphela - Kwimodeli ye-GSM, Kwimodeli ye-CDMA, Gapps
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Tab 7 ″ (p-1000) kwi-Android 4.0
Izimvo ezi-330, shiya ezakho
Kwaye nge-GT P-1010 (i-WiFi kuphela)? Iyasebenza ??
ewe, kodwa kwiphepha le-cyanogenMod kuya kufuneka ukhuphele i-rom ehambelana nemodeli yakho.
Njengakwinkqubo yokufaka iFirmware kunye neKernel, kuya kufuneka ukhuphele iifayile ezihambelana nemodeli ethile.
Jeovani junco sitsho
Akufuneki unike iimpendulo ezilula, okwangoku akukabikho romum ye-P1010 ene-Android 4.0.x. Ndiyathemba ukuba uJerome akenzanga mpazamo ngokuthatha iifayile ze-p1000 kwi-p1010 yakhe
Phendula kuJeovani Junco
Kwikhonkco kwinguqulelo ye-GSM, kuya kufuneka ukhuphele zonke iifayile, okanye enye ingentla?
Ekuphela kwento ephezulu kuba ikwindawo yokwakha ngoku.
Ndilandele onke amanyathelo esifundo esedlule kwaye ayiqali, kuye kwafuneka ndibuyele kunye ne-stock ye-2.2 kwaye nokuba ndiphinde ndiyenze kangakanani, ihlala isitena semi. Inokuba yintoni?
Iyasebenza, enkosi kakhulu ngegalelo ..
Ngexesha elifanelekileyo, Oplo, andinakukwazi ukuyifaka ...
Molo Jose, sele ndikuphendulile ngaphambili, ifayile ozama ukuyilayita ayisiyiyo eyi-P1000, kuya kufuneka ukhuphele i-zip engqinelana ne-p1, ayisiyiyo ye-p1n
Uxolo, andiqondi ukuba nangaliphi na ixesha ndikhankanyile ukuba iThebhulethi yam yiGT-P1000N GSM.
Kungenxa yoko le nto ndisebenzisa loo zip.
Enkosi ngalo lonke ixesha ngoncedo lwakho, ndiza kuhlala ndizama ngokweTutorial.
Jose yeyiphi eyona modeli yeTab yakho?
Yi-GT-P1000N GSM. Ithebhulethi yenguqulo yesiLatin.
Ngaba i-P1000n inokuba yiyo?
Ngaba ilungele iP1000L?
Abahlobo ndiyathemba ukuba niyandiphendula, ndiya ekuphulukaneni kodwa ndifumana kuphela iindlela ezi-4 -Ukuqalisa inkqubo ngoku - faka i-sdcard: update.zip - sula idatha / ukuseta kwakhona umzi-mveliso kwaye usule ukwahlula kwe-cache. Ndilufumana njani lonke ukhetho oluthi luvele kum? Ndiyabulisa ...
Kungenxa yokuba awunayo i-Recovery eguqulweyo efakiweyo
UAtsuko Manami sitsho
Umbuzo omnye ndibuze ukufakelwa kwe-gapps, kodwa andinasicelo seDijithali kunye nomabonakude we-analog. Ngaba umntu angandixelela ukuba ndiyifumana njani? (Ndifundile ukuba isicelo asisebenzi kwi-ICS TT). Enkosi.
Phendula kuAtsuko Manami
Indigcina ndiqala kwakhona ngokungenasiphelo
Kungenxa yokuba ekuqaleni unayo i-kernel kuphela efakiweyo, buyela ekubuyiseleni kwaye ukhanyise i-rom kwakhona ngaphandle kokusula okanye ukufomatha nantoni na
Sele ndiyenzile kwaye iyasebenza. Enkosi
Mholo! Ngaba kufanelekile ukuba ndinesiseko seHumberOS 5.4.0 Kernel ukuyenza ngale ndlela okanye iClockWork ekufuneka ibenayo? Ndine-P1000L, ngaba ndiyayikhuphela i-GSM P1 okanye i-P1L? Enkosi!!
Molo, ungandinceda, xa ufaka i-rom entsha, emva kwemizuzwana emi-3, a
E: Impazamo kwi /emmc/cm-9.0.0-RC1-p1n.zip
Andazi ukuba ndenzeni, ndiyaluxabisa uncedo lwakho.
Ngaba unayo ukubuyiswa kweClockworKmod?
Ewe kunjalo, ukuba unayo iClockworKmod yokufumana kwakhona
Ngokwento oyifaka kwiposti kukuba unefayile engeyiyo xa ukhuphela kwiphepha elisemthethweni le-cyanogenmod, i-zip onayo ibizwa ngokuba yi-p1n, kwaye ufuna i-p1, ngaphandle kwe-N, uyikhuphele kwakhona kwaye uza kubona ukuba yenze ibenye kakuhle.
Kuya kufuneka unikele ingqalelo ngakumbi kwikamva, kunye neempazamo ukuze ulayishe ithebhulethi.
Ngaba kufanelekile kwi-p1000n?
Ndiyabona ukuba abantu abaninzi kwizimvo bayabuza ukuba ngaba esi sifundo sisebenza ngemodeli ye-GT-P1000N (kwimeko yam, Movistar, Venezuela GSM)
Ngokukodwa: Ngaba iyasebenza okanye ayisebenzi? http://j.mp/LbwJ1k Ndilindele impendulo yakho exabisekileyo kwaye ndiyaqonda ukuba awukhange wenze naluphi na uvavanyo oluqinisekisa ukuba luyasebenza kwaye luxanduva lwam okwenzekayo, imibuliso,
Ndicinga ukuba le nguqulo yethebhu yakho, kodwa njengoko usitsho, andinakuyiqinisekisa, yenza i-nandroidBackup ngaphambi kokwenza le nkqubo, kwaye ukuba uneengxaki, khuphela i-odin kunye ne-firmware yoqobo evela ku-samfirmware.com.
"Into yokuqala esiza kuyenza kukukhuphela iifayile eziyimfuneko ukwenza isenzo, ke siya kukhuphela i-firmware yeGingerbread ecocekileyo kunye neKernel Overcome eguqulweyo ngeClockworkMod Recovery." -kusuka kwisifundo esidlulileyo-
Kwimeko yam, i-GT-P1000N (kwimeko yam, Movistar, Venezuela GSM) ndineFroyo 2.2, ngaba la makhonkco ayandinceda? izeziphi ezizezinye kum?
Olu qeqesho alusebenzi kwisixhobo sakho
Ndine-2.3.6 kwaye ndibeke ubusuku ngoJuni 25. Ubusuku bukaJulayi 1 abukwazanga ukufakelwa ngokuchanekileyo kwaye ithebhulethi ihlala ihlasela.
Into eqala rhoqo ukuqala kwakhona kukuba kwi-flash yokuqala ifaka i-kernel kuphela, kuya kufuneka ubuyele ekubuyiseleni kwaye ufake i-rom kwakhona ngaphandle kokusula okanye ukufomatha nantoni na
UAlvaro Torres Tatis obambe umfanekiso sitsho
Okokugqibela khange iphinde ivule. Ngokwesiqhelo, hayi kwimowudi yokukhuphela, yiyo loo nto ndicinga ukuba u-Odin akasamkeli isixhobo. Ndizamile nge Kies ukubuyisela kuhlobo lwefektri kodwa khange isazi isixhobo. Isikrini simnyama (ngokungathi khange sivulwe) kwaye xa usidibanisa nezibuko le-USB akwenzeki nto. Nasiphi na isiphakamiso? Ngaba uyazi nayiphi na inkqubo "yokufomatha" ukusuka ekuqaleni? Andililo ingcali ebaleni kwaye ukukhangela kwam kwi-Intanethi khange kube neziphumo ezilungileyo.
Phendula kuAlvaro Torres Tatis
NGABA NGU-P1000L ??
Ewe, ekuphela kwento oya kuthi xa ukhuphela i-zip ye-rom kuya kufuneka ujonge enye ehambelana ne-p1l kwimenyu esekhohlo kwiphepha leCyanogenmod
Ewe, khange ndikuqonde kwakhona uFrancisco, apha uxelele uMarcelo ukuba ukuba isebenza nge-P1000L kwaye uxelele abanye ukuba ayisebenzi, iyasebenza okanye ayisebenzi kwi-P1000L?
Kuya kufuneka ujonge kwiphepha leCyanogen ukuba kukho uguqulelo lwemodeli yakho
Molo Marcelo, ndinayo ne-p100L nayo… ukhe wazama ukuyenza le nto? Andikazami okwangoku, ndicela undazise.
Molo emva kwemini ndingathanda ukwazi ukuba iyasebenza kwi-GT-p1000nGSMH tab ene-Android 2.3.3, baseband P1000NUBJP3, enkosi kakhulu
Ndinayo i-p1000 kwaye ihleli ngokungenasiphelo, uphendule ukwenza
"Kungenxa yokuba ekuqaleni unayo i-kernel kuphela efakiweyo, buyela ekubuyiseleni kwaye ukhanyise i-rom kwakhona ngaphandle kokusula okanye ukufomatha nantoni na"
kodwa ayisebenzi kum, ndingenza ntoni cheers
Inxalenye yokugqibela ye «sula i-dalvik cache» ayiveli…. Iphi i?
UAntonio Fernandez Heras sitsho
Ndilwenzile ufakelo, kwaye bendicinga ukuba yonke into ilungile, kodwa ndiqaphele ukuba ikhadi langaphandle le-microsd libonakala lifunyenwe, kodwa andinakho ukufikelela kulo okanye idatha, kwaye andinalo ukhetho lokufomatha ikhadi, njengoko kubonisiwe ukusombulula, ngapha koko kuyothusa.
Phendula ku-Antonio Fernandez Heras
Ikhadi lememori langaphandle ngoku libizwa ngokuba yi-emmc kwaye likwingcambu yeefayile zenkqubo, apho ikhoyo ikhadi lememori okanye imemori yangaphakathi
Ndiyibuyisile i-4.0.4 kodwa kukhetho lokuvula i-microsd ayenzi, ngaphambili ndiyifomathile kwi-fat32 pc, andazi ukuba ichanekile na. Ndilahlekile ukuba undinika intambo
faka ikhadi le-sd langaphandle kwaye uqalise kwakhona isithuba esikhuselekileyo ukuze ikubone
Itafile ndiyilenga, ihlala ekuqaleni kwaye ukusuka apho ayiphumeli….
Zininzi izinto endicinga ukuba azilunganga
Ezi ziifayile ekufuneka zikhutshelwe kwikhadi le-sd, ndizibeke kwangaphandle hayi kwidiski enzima, kwaye ndicinga ukuba oko kundinika iingxaki
Inombolo yecandelo le-9 »Sizulazula kwi-zip ye-rom kwaye siqinisekisa ukufakwa kwayo»
Yintoni zip? I "cm-9-20120708-NIGHTLY-p1" Andiqondi, kwaye kufanele ukuba ibe kwingcambu sd okanye kwi-sd yangaphandle?
Ewe, masibone ukuba ungandinceda ndiyibuyise
Leyo zip equkethe i-rom esiza kuyibengezela, kwaye njengoko bendikuxelele kwisifundo, kuya kufuneka uyikope kwingcambu ye-sdcarf, akukho khadi langaphandle.
Angel Zapata sitsho
Kuzo zonke iinketho ekufuneka ziphume kum, ndinazo kuphela
Kwinguqulelo yokubuyisela ithi
Ukubuyiswa kwenkqubo ye-Android (3e)
Phendula u-Angel Zapata
Kuqala kufuneka ukhanyise ukuBuyisa kwakhona, kwaye kwimeko yakho, khuphela kuhlobo lwesi-2.
Molo, ngoku ndinayo inkqubo yokubuyisa i-Android (3e), ndingayikhuphela njani kwi-2. Enkosi
Jonga kwimenyu yokuseta Ukufikelela
Kulungile ngoku xa usebenzisa ukhetho 9 rom cm-9-20120708-NIGHTLY-p1 isikrini sihlala simnyama kwaye ukusuka apho asizukuphuma….
Ndine-GT-P1000 kwaye ndicinga ukuba uhlobo lwe-GSM lulungile
Ngaba unayo ingxelo yesi-2 yokufumana kwakhona?
Ukuba ndiqale ndenza enye i-ClockworkçMod Recovery tutorial kwaye ngoku le uphawula ngayo… andazi ukuba ndenza into embi na, ndiqinisekile, andinalwazi lungako ngayo yonke le nto
Ngapha koko ondixelela kona ndicinga ukuba ukuba ndinayo kwinguqulo yesi-2 yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ndixelele ukuba ungayibona njani kwaye ukuba andinayo ukuba ifakwe njani
Uxolo, umbuzo lo myalezo wesifundo somculo we-samsung we-p1000N, NDICINGA UKUBA ABANINZI KUFUNEKA SIYAZI UKUBA, NGAPHAMBILI SIYABULELA KAKHULU NGALO POSA !!!
Kuya kufuneka kuqala ufake ukubuyiswa kwakhona usebenzisa i-tutorial ethile epapashwe kwibhlog, emva koko ukhuphele i-zip ehambelana nemodeli yesiphelo sakho kwiphepha elisemthethweni le-cyanogen
Sele ndiyenzile yonke into kodwa xa ndivula itab yomthala ihlala inescreen esimnyama kwaye ithi i-galaxy tab samsung ihlala apho, sele ndiyenzile into ethethwa sisifundo malunga namaxesha ali-10 kwaye akukho nto ayenzekiyo: (!!!! nceda nceda !!
Ndiphinde ndayinika kwaye ngeli xesha yaqala ukucima nokucima, ndaphosa into yecyanogenmod kodwa emva koko yacima kwaye ke yenzekile yajika yacima: (!!!!!!!!!!!!!!! !!!
Ndifumana i-v3.0.0.5 yokufumana kwakhona kwinqanaba le-9 (Sihamba siye kwi-zip ye-rom kwaye siqinisekisa ukufakwa kwayo) ihlala ibhuqiwe njenge-loop ukusuka apho andiphumi, inokuba yintoni?
Kodwa ngaba ufakelo luqala okanye luhlala lubuyile ngokufanayo?
Isiphelo sakho siya kuba yi-p100, akunjalo?
Kwenzeka into efanayo kum, ihlala igcwele ngokungathi iluphu kwaye ukusuka apho ayiveli endiyenzayo.
Uyisombulule njani iluphu?
Uyazi ukuba ndizamile ukuyifaka kwakhona ukusuka kwinyathelo 9 kwaye ithi "ufakelo lutshitshisiwe." ndenzeni ngoku? Enkosi.
Andazi ukuba wenza into engalunganga, kodwa ukuyifumana kwakhona kuya kufuneka ubhalise kwi-samobile.com kwaye ukhuphele i-firmware yoqobo kwaye uyikhanyise nge-odín.
Molo ngoku, ukuba ndingayifaka, bendisenza ngokugwenxa ngoku, enkosi, ndikwisikrini ukuba uphawu lwecyanogen luyavela kwaye luthatha ixesha elide? kuba kudala ndikhona. Enkosi
Ithatha ixesha, gcinani engqondweni ukuba ufaka yonke i-rom kwaye ngokungathi uvula isixhobo esisandula ukuthengwa.
Wenza ntoni kakubi? Kwenzeka into efanayo kum 🙁 ndincede !!!
Ngaba uyazi ukuba bekukho kwiscreen se-cyanogen mod 9 okwethutyana, ukuqala kwakhona kuya kuba yintoni? ...
Unexesha elingakanani ulapho kwiscreen?
Ngoku ndiqala ukuba kwinxalenye ye-Android iyandihlaziya uyazi ukuba ndiyifakile kwakhona kwaye ndiza kushiya ukufaka izithuba zeGoogle kamva. Ukulibaziseka yintoni i-Android ephuculayo?
Kwimizuzwana embalwa kubonakala kum ukuba ndikhethe ulwimi kwaye lwaphinda lwaqala kwaye lwaqhubeka nopopayi lwe-cyanogen endilwenzayo ngoku?
Bekukho "i-Android iphucula" ukuqala kwezicelo okwethutyana.
Ngaba wenze konke ukosula kunye nenkqubo yokufomatha?
Ukuba ndiyenzile kweyokuqala emva koko ndiyibuyisele umva kuba ibingasebenzi kodwa khange ndiqale kwicandelo 9. Ngaba kufuneka ndiyenze ukusuka kwinyathelo1? kwakhona ?
Masibone ukuba unayo ifayile ye-zip engeyiyo?
Sukuyenza impazamo malunga nefayile, khuphela enye ye-p1000n njengale ndinayo
Khuphela i-zip ye-rom kwakhona kuba ayinakukhutshelwa ngokuchanekileyo, okanye xa uyikopisha kwithebhu iya kusilela.
Andazi ukuba yintoni enye endikuxelela yona, ukuba uqhubeka unengxaki, bhalisa kwi-samobile.com kwaye ukhuphele i-firmware kunye ne-odin, ubuncinci ngaloo ndlela unokuyifumana kwakhona ithebhu.
Molo, uyazi ukuba ngoku iyahamba ndide ndibeke iwotshi kwaye ndifuna ukuyivula ukuze ndiqale ukuyisebenzisa, iphinda iqalise kwaye emva koko ijike apho.
Phinda ukhanyise i-firmware i-2.3.3 nge-odin, emva koko ufake i-kernel kunye ne-Recovery nge-odin efanayo kwaye uqalise inkqubo ekhanyayo kwakhona.
INGABA UYAZI UKUBA XA NDIBEKA II-2..3.3 UKUKHANYA, isikrini esimnyama endisenzayo ngoku asikhanyisi okanye nantoni na endiyenzayo nceda?
Molo, uyazi ukuba ndifuna ukufaka umva kodwa ibeka ufakelo oluphosakeleyo kuba ndiyenza kwikhadi langaphakathi le-sd ngaphambi kokuba ndiyenze kwikhadi langaphandle le-sd kwaye bendizakuyenza ?????? .. enkosi
Kulungile masibone endikwenzayo, ndinayo ngohlobo lwe-Android 2.3.3 kwaye isebenza kum ... i-sim ayisebenzi, i-usb yesiqingatha ... yintlekele ... ucebisa ntoni ... Ndizama ukuyishiya njengefektri okanye ndiqale kwakhona ngohlobo lwe-4 luka-Android
Khuphela kwakhona i-zip ye-rom enokonakala okanye hayi eyomzekelo wakho
Umtya kungenxa yokuba UQhagamshelwe kwikhompyuter, ukutshaja ibhetri kwaye uyizame ngaphandle kwenkomo, kwenzeka into efanayo kum kwaye ndaqonda, kwimiyalelo ayizukuza.
KUFUNEKA IXESHWE KWI-PC OKANYE KWAMANDLA
Isebenza ngokwemiyalelo, kodwa oku kubekwa kuyo yonke indawo akuyizisi imarike, akuhambelani nabafowunelwa beGmail okanye ikhalenda ye-Gmail, kwelinye icala kwi-hotmail ewe, isabotage kwi-gmail? ayisebenzi isiqingatha sento eyimfuneko kuba bafumana iimpazamo, usetyenziso lwe-youtube, intengiso, usetyenziso lwe-gmail. intle kakhulu kodwa ayiloncedo kakhulu kumsebenzisi oqhelekileyo.
intombi encinci indishiye ndinje kwaye ungayokundilungisa!
Kulungile siyaqhubeka nelog kunye nescreen seCyanogen (mod) + yesamsumg kwaye ihlala ikhona, ngaphandle koqhagamshelo kwi-pc nakwindawo yokuphuma kwamandla ukusuka kwibhetri yayo ukuya kwi-99% yentlawulo ... andazi ukuba ndenze ntoni, kwakhona hlisa iifayile ezimbini ezintsha zokurekhodisha kwakhona xa kukho impazamo ... le ndikuxelela yona, andazi ukuba ndenze ntoni NGOKU !!!
Inye into xa uthatha isigqibo sokufaka kwi-sdcard yangaphakathi, eyam ibingenayo le folda kwaye ndiyenzile, ke ingcambu yile folda ibizwa ngokuba yi "sdcard" kwaye kuyo ndibhale iifayile ezimbini
Yeyiphi imodeli yethebhu onayo?
Zonke zinayo loo folda kuba iyimemori yokugcina yangaphakathi
Akukho nto iqhubeka ijikeleza ...
Ewe kufuneka ube nefolda ebizwa ngokuba yi-sdcard, ewe okanye ewe.
Ndinayo kuba ndiyakholelwa ...
Ewe ndiyifakile kwakhona i-2.3.3 ilungele ukuhlaziya i-4.0, yonke le nto ekubuyiseleni ndinomyalezo obomvu »E: Impazamo ye-MBR Checksum yangaphakathi ye-MMC Checksum qinisekisa ayiphumelelanga» ...
Ndivuselela i-4.0 okanye ndibone into endiyenzayo
Ndibeka iifayile kwingcambu okanye kwifolda ye-sdcard
Masibone mhlobo, ukuba kuye kwafuneka wenze ifolda yekhadi, kukho into engalunganga ngesixhobo sakho, kuba ifolda yekhadi ye-sdcard iza kumgangatho kuyo kuba yimemori yangaphakathi yesixhobo.
Ukuba unayo kwi-2.3.3 kwaye wenza kakuhle, musa ukubeka emngciphekweni kwakhona, kuba njengoko benditshilo into engaqhelekanga yenzeka kwisiphelo sakho.
Enkosi ... ingxaki kukuba ndifuna ukubeka into esebenzayo kuba ngoku i-sim ayiyiboni kwaye ndishiyiwe ndingakhange ndiyisebenzise njengeselfowuni ... okanye ndiyibeke kumzi mveliso endingawunikeli ' Ndiyazi ukuba ungayenza njani, ukuba ungandinika ingcebiso
Ukuyibeka kumzi-mveliso kufuneka ubhalise kwi-samobile.com kwaye ukhuphele i-firmware apho.
Kwibhlog unesikhokelo sendlela yokusebenzisa eli phepha:
Carl ukuhambelana namazwi sitsho
NDENZA NJANI NGOKUQHAGAMSHELANA NDIYENZILEYO YONKE INTO OTHE YENZA KODWA NGEXESHA LOKUFAKA, Itafile iyandibuyisela kwaye iqale nge-CYANOGENMOD LOGO KE IYABEKA IYIBEKA? KWENZEKANTONI!!!
Ami kwenzeka into efanayo kum ukuba ingxaki kukuba andizenzanga kakuhle amanyathelo. zama ukwenza amanyathelo ukusuka ekuqaleni kwakhona.
Isizwe seDy sitsho
Molo ndine-GT-P1000L, uyazi ukuba izakusebenza kakuhle?
Ndabona ukuba uthe ewe, ukukhuphela kwiCyanogenMod enye ye «p1l», ndingena apho kwaye ngokungafaniyo nezinye iifayile ezibhalwe NGOBUSUKU, kwi-p1l inye kuphela kwaye luhlobo lwe-RC ...
Imibuliso kunye nemibulelo!
Phendula kuDy Nation
Ewe, yeyakho imodeli.
Ngaba unayo i-ClockWorkMod Recovery efakwe kwithebhu yakho?
Umhlobo wombuzo ndiyifakile yonke into, kude kube ngoku ukuya kubunewunewu KODWA? Xa ndibeka i-sim khadi kwi-movistar, ayiyazi inethiwekhi kwaye indinika "impazamo yenethiwekhi ekhethiweyo" .Ndicela undincede, enkosi kwangaphambili.
Kuya kufuneka ukhethe inethiwekhi ezenzekelayo kwimenyu yeseto kwaye kufuneka uqwalasele ii-APNs ukuba zibe nonxibelelwano lwe-Intanethi
Molo uFrancisco, naziphi na iindaba ezinesifundo se-P-1000L nge-gingerbread 2.3.6?
Ndikulo ngokukhawuleza ukuba ndinento ethembekileyo kwaye ndiza kuyipapasha
Molo uFrancisco, akusekho nto nge-P-1000L? Ndicinga ukuba sowusilibele! 🙂
UAlberto Chavez sitsho
Ndine-p1000L ene-gingerbread 2.3.6 enyanisweni ndinazo zonke iinkqubo kunye nephepha endikhangela kulo.
Phendula u-Alberto Chávez
umntu sele eyenzile nge-P1000L? Andilufumani uthando lwe «L» ...
aaaaahhhh nceda ndinayo okanye ndinethebhulethi kwi-android 2.3.6 kwaye ndiyenzile yonke ititshala, kodwa xa ndingena kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo imenyu yahlukile kweyokufundisa kwaye ke ndaqala ukwenza okungaphezulu okanye kancinci njengoko bekusitsho isifundo kwaye nini Ndiqale iscreen nge «galaxy tab» kunye ne «samsung» kwaye apho yabanda
Ukuba imenyu yokubuyisela kwimeko yesiqhelo yahlukile, kufanelekile ukuba ubuze ngaphambi kokwenza nantoni na, nakanjani uye ku sammobile.com ubhalise kwaye unokukhuphela i-firmware yoqobo ofuna ukuyifaka kwi-odín
ULuis Eduardo Castillo Aragon sitsho
Khanyisa ithebhulethi kwakhona ukuya ku-2.3.6 njengoko wawusenzile ngaphambili kwaye isonjululwa okanye undixelele ukuba uyafuna ndikunike ikhonkco lendawo kunye nendlela yokuyilayita ndinayo kwi-4.0 ngesinye isifundo kuba le ayizange isebenze
Phendula uLuis Eduardo Castillo Aragon
UYesu garcia chaves sitsho
ndigqithe kula tuto pliiiiiisss nale andikwazi
Phendula kuYesu Garcia Chaves
IRizkOol Rsk sitsho
Ungandifumana ikhonkco letute oyisebenzisayo, ndine-GT-P1000L kwaye khange ndikwazi ukufaka i-Android 4.0, enkosi
Phendula kwiRizkOol Rsk
Ngaba unayo i-p-1000L ye-gingerbread 2.3.6 enee-Ics? dlulisa idatha kuba nguwe wedwa kwi-intanethi oyiphumeleleyo
Molo, uyazi ukuba ndifuna ukukhanyisa ithebhulethi ukuya ku-2.3 nge-odin kodwa ndine-p1000n kwaye ndiyabona ukuba yeyama-p1000 nje enye iposti yokufaka, kuba le ye-p1000n ene-heimdall andikwazi ukuyisebenzisa, yintoni Ndikwenza kuba ndiya ku-smobile.com kwaye andiqondi ukuba ndingahlisa njani i-2.3 yeyam, enkosi
Jonga le vidiyo ijongeka ngathi sammobile.com iyasetyenziswa.
Uyazi ndiyenzile kwaye ihlala ilandelwe isamsung emva kwehologram ... nasiphi na isisombululo?
Molo, ukuba ndiphumelele ngesi sithuba kuba kuye kwafuneka ndenze ifomathi yonke into kwaye ndiqale kwangoko ngeposi yangaphambili eluncedo kakhulu (Ungayifaka njani ingcambu kwaye ufake kwakhona ukubuyiswa kweClockworkMod kwi-Samsung Galaxy tab p1000).
Ndifuna ukunika izimvo kwabo bangaphumeleliyo ukufakela okokuqala kwi-4 ye-ROM kwaye baxhonywe kwinkqubo yokuqalisa kwakhona engapheliyo ukuba bafake iposti yangaphambili ekhankanywe ngaphambili, kuba ngale nto ayiphumeleli. (Phambi kokuba ndifake iGinge kwisuperoser kwaye ... ayifani).
Enkosi kakhulu kuFrancisco ngale post intle kunye neqela labaphuhlisi beCyanogenMod 9 ngokwenza ukuba abanye baphike ukuba kunokwenzeka.
Umbuzo uFrancisco, ndiqinisekisile ukuba le nguqulo ayizukufika esemgangathweni ngesikhangeli sefayile, isisombululo sesikrini sibekwe kwimida eyenza ukuba kube nzima ukufunda ifonti encinci kwaye ezinye izicelo ziyavala ... ezinye zamkelekile , Kodwa ngaba yimeko yam okanye iyenzeka kwabanye? Enkosi kakhulu kunye nemibuliso.
Isikhangeli sefayile siqhelekile, akukho Cyanogen yoqobo ihlala iyithatha, ileta iyitshintsha kwimenyu yokuseta, kubonakala kum ngathi uyakuyifumana kukhetho lwescreen.
Ewe, ewe uFrancisco, kukho ithuba lokutshintsha ubungakanani befonti kule menyu kwaye ke incinci kakhulu kangangokuba kubantu abanjengam abakwiminyaka ethile, ngaphandle kweglasi kufuneka usebenzise iglass yokwenza into ukuba ayiyimicroscope.
Ndicinga ukuba ukulungiselela iscreen, isisombululo sitshintshiwe kakhulu, esichaphazela usetyenziso apho yonke into kunzima ukujonga. Ukunciphisa iziphumo kancinane, ndisebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba yi-Big Font ekuvumela ukuba utshintshe ubungakanani beefonti, kule meko kufuneka ndiyibeke kubuncinci be-140% ngaphezulu komgca wokuqala ukuyenza ibonakale.
Enye into endiyibonileyo iguqulwe kukwenziwa kwakhona kweevidiyo. Ngoku ayizivelisi izandi kwaye ayimnandanga.
Okokugqibela, ukusetyenziswa kwe-intanethi kuye kwanda ngenxa yokuba andazi ukuba yeyiphi into efanayo kunye nebhetri ehlala efanayo okanye engaphantsi.
Izinzile kwaye inamanzi kuneGinge ngaphandle kwamathandabuzo kodwa isishiya silinganiselwe kancinci xa sisebenziseka. (Asinazo ii icon ezinqumlayo ...)
Kwesinye isithuba ndibone ukuba kukho uhlaziyo olusemthethweni olwenziwe yiSamsung kwi-ICS (https://www.androidsis.com/android-4-0-llegara-a-tablets-galaxy-tab/).
Kule ndingathanda ukwazi ukuba uhlaziyo olunje luya kuza nge-kies okanye ngaba kufuneka sijonge ubomi njengesiqhelo?
Ndiyabulisa kuFrancisco kwaye ndiyavuyisana nesithuba sakho.
Molo, uxolo, ungayenza njani, iyandixelela ukufakelwa okukhutshiweyo
Ewe, ukufunda wonke umntu kwaye ubona ukuba uninzi alufumani luncedo, kukucinga ngayo, ithebhulethi yam ikwiVodafone ukuze bakwazi ukulungisa umonakalo onawo, okuyimpazamo yam, andiyithandabuzi, kodwa Esi sithuba senzelwe abantu kakhulu, ingcali okanye hayi, kwi-HTCS ndenze izinto ezininzi kwaye lixesha lokuqala ukuba oku kwenzekile kum, ... kulungile xa isuka kumzi-mveliso andiyichukumisi. Ndiyathemba ukubona into ezinzile okanye ethembekileyo ... enkosi kubo bonke, ukubingelela.
Ayisebenzi kwi-tab ye-galaxy p1000l enyanisweni ihlala kwiscreen esimnyama kwaye ayidluli apho kwaye ndicinga ukuba iyabetha kodwa ndizama nelinye igumbi ukubona ukuba ndingenza into kuba ithebhulethi iyajika kodwa ayisebenzi jonga ngononophelo ukuba bayayenza ngemibuliso yama-p1000L
Uyazi ukuba iheimdall indixelela Impazamo: Yehlulekile ukufikelela kwimpazamo ye-device.lisbusb: -12 xa ndiza kufaka ukubuyisela kwakhona ndilungisa abaqhubi nayo yonke into kwaye andazi ukuba inokuba yintoni? Enkosi
Ndenze oku kulandelayo: Khipha ii-Kies, khipha ii-driver ze-Samsung emva koko ufake ii-Heimdall driver nge-zadig, funda ifayile ye-readme ekufuneka ikwifolda ye-Heimdall, kufuneka ikuncede undithande.
Ndinegalaxy gt 1000 3g
Ngaba olu hlaziyo luza kusebenza?
S yi-GT-P1000 ukuba iyakusebenzela, kodwa kuya kufuneka ubuyisele ulungiso olufakiweyo kwaye ulandele imiyalelo kwileta
Molo, uyazi ukuba ndibeka Khetha i-zip kwi-sdcard yangaphakathi kwaye ayikho, kodwa ukuba ndibeka Khetha i-zip kwi-sdcard yiyo kodwa iyandixelela ukufakelwa okukhutshiweyo kwaye andinakho ukuyifaka njengoko ndisenza njalo ukuba ikwi-sdcard yangaphakathi. .. ukuba ungandicacisela ii-thankssss
Uxolo, uyenze njani kum, ayizukundivumela ukuba ndibeke ufakelo lukhutshwe
Oko kungenxa yokuba ukhuphele indawo engalunganga, okanye ngenxa yokuba ungenayo i-Recovery eguqulweyo efakiweyo
UFrancisco! Pearl! Yayisisidenge kancinci, kodwa ndanyanzela i-zip ama-3 okanye ama-4 amaxesha kwaye i-4 yayisebenza ngokugqibeleleyo kwaye yayifakelwe, emva koko yavula iiperile kwaye isebenza ngokugqibeleleyo, ilunge kakhulu. Enkosi ngencwadi!
Molo, ngaba ungxamele ukundixelela ukuba wenze njani ukusukela oko ukufakelwa kwesisu kuvele kum… enkosi
molo ngokusa okuhle jonga apha ndinesikhokelo esibhalwe ngabafana abasuka kwiCyanogen Mod ye-P1000l othi ithembekile?
Ndishiya ikhonkco ukuze ujonge
Hlaziya kwakhona sitsho
Uxolo lokungazi kwam, kodwa ndazi njani ukuba i-TAB yam yi-GSM okanye yi-CDMA?
gsm ikwi-simcard kunye ne-cdma ikumgca kodwa ngaphandle kwesimcard
Molweni umbuzo omnye. Ngaba oku kuyasebenza kwi-GT-P1010? i-wifi esi-7. Enkosi
UTony Joshua Jimenez sitsho
Olu qeqesho lolwe-galaxy tab 7 GT-P1000N, iyafana nomzekelo?
Phendula uTony Joshua Jiménez
Jonga ibhlog yakho enesifundo esithile se-P-1000N
Mzalwana wam, ke ukuba ndinokuba nayo i-android 4.0 kule thebhulethi. Ndingu-newbie kule OS, kwaye ndifuna ukufunda. Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela kakhulu.
uxolo lokungazi kwam, kodwa ndiya njani kwisifundo? Ndiyabulela kakhulu ngomsebenzi wakho
Nantsi ikhonkco: https://www.androidsis.com/como-instalar-el-recovery-a-la-samsung-galaxy-tab-p1000n/
Enkosi ngempendulo yakho, Emva kokufaka ukubuyiswa kweClockworkMod, ndingayifaka le Rom kwi-Android 4 kwi-P1000N yam?
UMarcelo groos sitsho
Molo molo wam emva kwemini ndinayo i-galaxy Tab 7, GT-P1000N ene-firmware engu-2.3.3 kunye ne-kernel 2.6.35.7 se.infra@SEP-49 # 2 yokuhlanganisa iGingerbread.vfjp6
Ndingayisa kuhlobo olutsha?
Ungandixelela ukuba zeziphi iifayile endinokuzikhuphela ukuze ndiphephe ukwenza impazamo?
Ngamanye amaxesha indinika umyalezo wepopApp
"" Siyaxolisa. Inkqubo yeSakhelo seNkonzo zikaGoogle (inkqubo
com.google.process.gapps) ime ngokungalindelekanga. Zama kwakhona. Nyanzela ukuvala / ingxelo »
Phendula uMarcelo Groos
Q iphambili / susa i-dalvik cache ??????
UNorman Tral sitsho
Ngaba kunokwenzeka ukuba uhlaziye i-galaxy tab yezo zithengiswa eArgentina nguMovistar ene-digital tuner yomoya edibeneyo? Umbuzo wam kukwazi ukuba ngaba i-digital TV izakuqhubeka nokusebenza Enkosi
Phendula kuNorman Tral
UFrancisco into ekhoyo nge-p1010? Enkosi ngomsebenzi wakho obalulekileyo.
Molo ulunge kakhulu kwakhona. Ndibuyele ekukhathazeni enye into encinci. Umbuzo wam ngoku ngu… Ukuba ndifuna ukufaka ingxelo ezinzileyo ye-CM9. Ndingayenza njani?… Inguqulelo ngu-cm-9.0.0-p1. Kwaye ukuba le nguqulo ineengxaki ezimbalwa kwikhamera kunye nesikhangeli. Ukongeza ivenkile Android. Enkosi.
Intombi yam ikhuphele i-twitter kodwa ayizazi ukuba ikuphi kuba ayikho kwi-downloads ndicela uncedo
Ngaba usetyenziso olufakelweyo lulahlekile xa uhlaziya i-gt-p100?
Ngaba siphulukana nezicelo esele zifakiwe kwithebhulethi yethu?
Ewe kunjalo, kufuneka sisete kwakhona umzi-mveliso sisusa yonke into
Ngaba ikhona indlela yokufumana usetyenziso emva kohlaziyo?
Ewe, ngaphambi kokuhlaziya yenza isipele ngeTitanium Backup.
Emva koko uhlaziya, faka i-Titanium Backup kwakhona kwaye ubuyisele ii -apps zakho ezigciniweyo
Molo uFrancisco, emva kokuhlaziya ithebhulethi, ngaba sisengcambu? kwaye akukho ngxaki ngefowuni? kwaye uyazi njani ukuba yi-GSM okanye i-CMDA
Sele ndihlaziye umbulelo kule ncwadana. Ndingathanda ukufaka intetho kaGoogle ukwenza iifowuni zevidiyo. Ungandinceda?
Ituto emnandi enkosi kakhulu
isebenza ngokugqibeleleyo !!
Ingxaki endiyibonayo ngeROM kukuba andinakho ukubeka indlela emfutshane "kwiifayile zam"
Ngaba iyenzeka le nto ???
Molo, olu hlaziyo lusebenzela i-Samsung Galaxy Tab GT-P1000n?
Ngaba oku kuyasebenza kunye ne-p1000n?
uyenza njani ikhamera isebenze
Ndifuna ukuyenza kwitafile yam yemodeli gt-p1000l evela kumqhubi weefowuni waseMexico kwaye andikwazi !!! Ngaba ikhona indlela yokwenza ???
Ngenisa ikhonkco elithetha kwisifundo..ukusuka apho, jonga kwicala lasekhohlo kukho iimods ezininzi !! Khangela le ithi p1l eyep1000L ok..haa kwaye ngaphezulu kwayo yonke ikhuphele ezosetyenziso zikaGoogle ok..ndilandele amanyathelo aqhelekileyo omhlohli kulungile nam ndabulisa ndivela eCampeche. EMexico ... uhlala ixesha elide eMexico ...
UFernando Sartorelli sitsho
Iimodyuli zep1000L yi-p1l Kulungile. kodwa…
Ngaba ii -apps zikaGoogle zep1000l ziyafana nezeP1000?
Enkosi .. Fer
Phendula uFernando Sartorelli
Ndine-samsumg galaxy tab 7 P1000N kwaye ndenze njengoko le mfundo isitsho kwaye isikrini sihamba mnyama, umntu owaziyo ukuyifumana kwakhona inkqubo ye-tab kwakhona. ujike ajike athathe iingcambu kwi-odin kodwa andazi ukuba ndenze ntoni?
Kuqala olu luhlu lwe-p-1000 ngaphandle kwe-N.
Ukuba ungangena kwimowudi yokukhuphela, khuphela i-firmware yasekuqaleni kwiSammobile.com kwaye uyikhanyise nge-odin ukuyifumana kwakhona.
Ndingathanda ukwazi ukuba kukho isifundo sokuhlaziya i-P1000L. ndiyabulisa kwaye ndiyabulela kakhulu.
Kwi-p-1000L akukho nto intsha
Ndingumsebenzisi we-novice kwaye bendifuna ukwazi ukuba ukuze ndenze olu hlaziyo kufuneka ndenze isifundo sangaphambili osikhankanyileyo ekuqaleni sendlela yokufaka i-stock firmware kwi-Samsung Galaxy Tab 7 ″ kwaye emva koko ufake i Ukubuyiselwa kweClockworkMod. Enkosi
Ndinengxaki enkulu nangakumbi, ayiyiboni i-sim yam, ke ayisebenzi njengefowuni, kwimeko apho ingasebenzi kwizixhobo ze-telce, sele ndizamile phantse zonke iirom kwaye ezinye zinika zonke iziphene, Akukho uzinzileyo, abanye abayisebenzisi Ikhibhodi iyandisebenzela, okanye ikhamera, eyokugqibela ilungile kodwa ngoku iyi-sim yam, kwaye ngaphandle kwe-sim akukho nethiwekhi
Ekugqibeleni khanyisa isitokhwe
Nge-11/09/2012 ngo-20: 21, «Disqus» wabhala:
U-Orlando R.- sitsho
UFrancisco enkosi ngolwazi lwakho, ndingathanda ukukubuza ukuba ndingenza ntoni. Ndizama ukuyihlaziya kwaye kukho into engahambanga kakuhle. ayingeni kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye ayiqali nokuba. ibifile kwiscreen sokuqala.
Kuya kufuneka ndiyenze nge-odin. kodwa ifayile ye .tar ayize ivele. nceda ncedaeeee
Phendula uOrlando R.-
Apha unayo yonke imiyalelo eneenkcukacha https://www.androidsis.com/como-actualizar-la-samsung-galaxy-tab-7-p-1000-a-android-4-0/#comment-652417355.
Ngokubhekisele kwiifayile zeTAR, kuya kufuneka unzip iifayile kwaye ziya kuvela apho, ndijongile kwaye amakhonkco kunye neefayile zisebenza ngokugqibeleleyo.
Enkosi ngegalelo lakho. Kucace gca.
Ndonwabile ngohlaziyo ngaphandle kwe-3 fat PROBLEMS.
Inkqubo yebhodi yezitshixo ye-Android yengozi rhoqo kwimizuzwana emi-5.
Akukho datha ye3G.
Akunakwenzeka ukuba uqhagamshele iWIFI.
Molo, vele ubuze ukuba ngaba iinkqubo ezifakelweyo ngaphambi kokukhanyisa zigcinwa emva kohlaziyo, enkosi.
Hayi, yonke into ilahlekile emva kokucinywa kwedatha yokuseta kwakhona
Ibhodi yezitshixo ayisebenzi ngalo lonke ixesha "isicelo se-Android ye-keyboard simile" kwaye akukho ndlela yakungena ekufakeni izitshixo ze-Wi-Fi, ngokungathi khange zanele, akukho mhloli wefayile onokufaka enye ikhibhodi
Ngenisa ukubuyisela kwaye wenze ukusula okuthathu kwakhona
Nge-14/09/2012 ngo-20: 39, «Disqus» wabhala:
Ikhamera okanye ikhibhodi ayisebenzi
Molo, mva kwemini elungileyo; Uxolo ndinengxaki efanayo, ikhamera okanye ikhibhodi ayisebenzi kum; ikhamera inokufakwa enye kodwa ngenxa yale keyboard kufuneka; ungayisombulula?
Molo, mva kwemini elungileyo; Ndimtsha koku, ndenze yonke into nanjengabanye kwiforum, nokuba ibhedi okanye ikhibhodi ayisebenzi kum; Ndingene kwimowudi yokubuyisela kwakhona kwaye ndazisula kwaye zihlala zinjalo; nasiphi na isisombululo. Enkosi
molo, bendifuna ukwazi ukuba iyasebenza na i-GT 1010 okanye ndingayikhuphela phi enye yelo cwecwe. Andifumani nto.
Ndifakele uguqulelo lwe-10 okoko inguqulo 9 yandinika iingxaki. Umcimbi uzinzile kodwa uneengxaki ezimbini.
1- andinayo i-3g, nokuba ndiyijonga kangakanani, ndine-wifi kuphela ngaphandle kwe-3g.
2- Xa ndicima itafile ngexesha lokuyilayita, ihlala ilogo kwaye ayenzi enye into endimele ndiyenze ukuyibeka ekubuyiseleni nasekufakeleni kwakhona ingxelo kwaye iqala kakuhle ngazo zonke izicelo endizenzileyo inyukile.
Uyazi ukuba i-3g isebenzela umntu ???
Kwenzeka into efanayo kum, kwaye inyani kukuba akukho mntu undinika isisombululo. I-Apns kakuhle, yonke into ichanekile, iThebhulethi iyabutofotofo kodwa idatha ye-3g ayikho kwaphela.
Ukuba ufumana isisombululo, phawula ngaso. Imibuliso kunye nombulelo ngokuqwalaselwa kwakho
Mholo! Uxolo andikwazi ukukopa iifayile kwi-pc yam ukuya kwi-Galaxy 2 7.0 yecwecwe, kufuneka ndenze ntoni?
Umnxeba weLeandrobellorin sitsho
Kulungile ndingathanda ukwazi ukuba ngubani onokuthi andincede ndikhawuleze ukufomatha kwakhona nantoni na ithebhulethi yam uCoby Kyros 1042 crap yi .. Ndizamile yonke into okanye yonke into ukuseta kwakhona kwefektri kunye nabanye kwaye nahh nceda undincede. leandrobellorin@gmail.com
Nge-20/09/2012 ngo-14: 57, «Disqus» wabhala:
Kulungile kuqala kwako konke ndiyabulela ngokuphendula ngokufutshane. Ithebhulethi intsha, ezinye izicelo azisebenzi kwaye ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyisiphule emva kokulwa kakhulu ukuyenza kwaye ndiyiphumeze. Ndinempazamo ngegps endiyifakileyo. Ukuqalisa kwakhona kwaye andiyi kuqala, ihlala kwigama le-Android ukususela ekuqaleni. Ndamnika ukuba avule imenyu engakumbi phakathi kokubuyiselwa kwenkqubo ndamenza wosula yonke into kwaye akukho nto imodeli MID1042 ungandinceda ukuyibeka njengokucima yonke into?
enkosi ukusuka cora ..
Ngokukhawuleza xa ndinexesha ndijonga ukuba yintoni enokwenziwa.
NgoSeptemba 20, 2012 15: 37 AM, Disqus wabhala:
Kulungile ndikushiyele i-msn yam ukuba unomdla wokukunceda, inyani kukuba into endiyaziyo isekwe ekuzameni nasekuzameni kwaye inokukunceda, ndiyakushiya i-msn yam ukuba unomdla okanye uFrancisco Ruiz uxakekile juanka123_15@hotmail.com
Molweni, ndinetafile ye-GT-P1000R kodwa yonke into ibhalwe ngesiNgesi. Ngaba ikhona indlela yokutshintsha ulwimi? Kungenxa yokuba indinika ngesiFrentshi isiNgesi nesiJapan. Ngaba ungasinika isandla ndiyathemba ukuba impendulo yakho iyajongeka suarez27@yahoo.es
xa ufaka i-4.0 njengoko kubonisiwe apha, ndiphulukana nomsebenzi wokubiza kunye ne-3g (isiseko sebhendi).
Andikwazi ukufikelela kwi-wifi nokuba….
umntu uyasazi isisombululo.
Enye ingxaki kodwa kulula ukusombulula ikhibhodi, khuphela enye kwaye yiyo.
Enkosi ngesisombululo sakho sekhibhodi, kodwa uyifaka njani kuba awunakho ukufikelela ekudlaleni?
Ukuba kukho into eyenzekayo ndingayisusa njani ???
Ndizibonile nezimvo zokuba ikhamera, i3g, ikhibhodi iyasuswa (sele isonjululwe)… ikhuselekile… ukuba kukho into engalunganga eyenzekayo, ndiyisusa njani ???
Yonke into iyandisebenzela ngaphandle kwekhamera kunye nesikhangeli, kodwa njengoko ndifaka i-chrome, i-3G ayindingenisanga ngaphandle, akukho icon iyavela kodwa iyandisebenzela. Ukuba uyifakile ayikuqinisekisi, ungabuyela kwenye inguqulelo kwesi sifundo
Ingxaki yekhamera isonjululwe ukuba ayihambelani nesicelo esisiseko, khuphela enye kwaye yonke into ilungile
Molo NDIMNTSHA KWAYE NDIFUNDILE NDENZE ukubuyiswa kweClockworkMod kwithebhu yam Samsung Galaxy p1000
Ngoku ndikopa iifayile kwiCyanogenMod 9 rom, kwaye ndiye kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye i-Android ihlala nomhlakulo kodwa ayiqali
ukufakela kwi-SD okanye kwindawo yememori yangaphakathi?
umntu oza kundinceda !!!! Ithebhu yam yi-p1000n pro andiqondi inyathelo lesi-3, akukho nto ibonakala ngoko ndenza ukufaka yonke into kwaye ndifumana impazamo ... ithebhu yam ngu-3g ekufuneka ndibeke i-GSM yinyani okanye ndibeke i-CDMA
Molo Molo mhle ndinetabhulaktha ye-p1000, njengabanye, akukho khamera okanye ikhibhodi ayisebenzeli mna; Ndifumana umyalezo applicationisicelo se-keyboard se-Android siyekile¨, faka ukubuyisela ndenze i-3 yokusula kwaye ihlala injalo; nasiphi na isisombululo?, enkosi
Okokuqala, ndingathanda ukubulela ngokuzinikezela kunye nomonde oboniswe kokubini ekuphumezeni nakuncedo olunikwe abo kuthi banamathandabuzo.
Ndiyenzile inkqubo ngokuchanekileyo kwaye indinike impazamo yekhibhodi kunye nekhamera ngohlobo lwe-cyanogenmod 10 -20120924-ebusuku-p1, uhlaziyo kwi-10-20120926-ebusuku-p1 kodwa ungafaki iGapps404.
Ndikwazile ukuqinisekisa ukuba yonke into iyasebenza, kodwa xa ndiqala kwakhona kwaye ndifaka i-gapps404 kwakhona kwaye ndisenza ezintathu zokucima kunye nokuqalisa kwakhona, kuxa ndaphinda ndafumana ezi mpazamo.
Kubonakala kum ukuba le yokugqibela yeyona ifuna ii-tweaks ezimbalwa, nayiphi na enye indlela?
Kuya kufuneka ufake ii-4.1 gapps zale nguqulo ye-cm10, ikunika impazamo kuba ufaka ezi 4.0.4
USoledad Santamarina sitsho
Isifundo esihle kakhulu, sicace gca kwaye sineenkcukacha! Kodwa ikhonkco lakho le-gapps likhokelela kuhlobo lwe-4.0.4, yiyo loo nto ingxaki yeqabane.
Phendula uSoledad Santamarina
Ngaba isifundo senzelwe u-4.0.4 hayi u-4.1
altami efanelekileyo; faka i-cyanogenmod version 10 -20120924-ebusuku-p1, ngaphandle kokufaka i-gapps404 nayo yonke into iyasebenza; Ngaba ukhona umntu owaziyo ngayo nayiphi na i-gapp ngaphandle kokusilela ????
Mholo emvakwemini. Ndine-Samsung Galaxy Tab 7 ″ (p-1000) kwaye ndingathanda ukwazi ukuba ngaba sikhona isisombululo sokufunda amakhadi e-SD kunye ne-samsung adapter ye-sd okanye i-usb.
Enkosi ngalo lonke olu lwazi ulunikelayo, kuba luyanceda ii-newbies ezinje ngam ukuba zibambe.
Ndiyazi ukuba le nto ndiyicelayo inokuba ayinangqondo, kodwa ndingathanda ukwazi ukuba iqala njani kwakhona kwimowudi yokubuyisela.
Ivolumu phezulu kwamandla
M Mariogc sitsho
Sele ndiyisombulule, kodwa ndifunda yonke iposti, ndinengxaki yekhibhodi kunye nekhamera.
Phendula M Mariogc
sos, andazi ukuba ndisombulula njani ikhamera kunye nekhibhodi, kwaye ngaphandle kwekhibhodi, andinamsebenzi kwithebhu. Enkosi.
Khanyisa i-rom kwakhona ngaphandle kokwenza nayiphi na into yokusula, mhlawumbi oko kuyakusombulula.
Enkosi. Ndizama ukukuxelela
Molo, ndinguAndres, ngaba akukho bungozi bokuba ithebhulethi ayizukusebenziseka?
Umthala wam i-GT-P1000N isetyenziselwa le nguqulo ungawashiyi amanyathelo eposti yakho undincede
Ndiyabulela kakhulu uFrancisco ngeP1000 3g yam isebenza ngokugqibeleleyo
Ngaba uya kuba nayo nayiphi na indlela yokwenza okufanayo nge-P1010?
Ndiyabulela kakhulu uFrancisco.
Umsebenzi omkhulu, ucaciswe kakuhle. Ngowuphi umsebenzi ongasemva kwesifundo esinjengale.
Ndilandele amanyathelo nayo yonke into esebenzayo. Ingxaki kuphela kukuba ndafaka ingxelo yamva nje yenkqubo, kunye neeapps zangaphambili. Kodwa yakuba yonke into ilungisiwe kulungile.
Molo kwakhona uFrancisco.
Njengabanye oogxa bam andibuthandi ubungakanani befonti kunye neempawu. Kodwa ukutshintsha umxholo kusonjululwe kwaye ngoku kusebenza ngokugqibeleleyo (ngobukhulu njengakwiGingerbread). Kwaye iselulwelo ngakumbi kunangaphambili.
Kodwa ndinengxaki, kwaye ayidibanisi neeKies. Xa ndifaka intambo indixelela "uqhagamshelo lwe-USB" kwaye indinika ithuba lokuvula ngokugcina ngobuninzi kwe-USB. Isebenza kakuhle.
Kodwa xa iyenza isebenze i-Kies ayidibani. Ihlala kwi «qhagamshela».
Ngaba ucinga ukuba inokuba njalo?
Iinguqulelo ezingaphezulu kwe-Gingerbread, njengoko zingekho ngokusemthethweni, azibonakali yi-Kies
Ngo-Okthobha 9, 2012 23:16 AM, Disqus wabhala:
UMARIO SANCHEZ sitsho
Kulungile enkosi kakhulu ngengcebiso yohlaziyo kodwa ndinengxaki emva kokuhlaziya ifemu kwithala lam lomthi p1000 ayikhange iphinde ivule kuphela ii-LED ezisezantsi kwaye ayiziboni nayiphi na indibaniselwano yamaqhosha okanye nantoni na, eneneni ayisasebenzi Into endiyenzayo ndilahlekile Ndayithenga kwaye yandikhathaza nceda ukuba umntu uyazi ukuba angayilungisa njani ngesoftware ethile okanye nantoni na endiza kuyilindela kwizimvo zakho.
Ndilibale into, isifundo endisilandeleyo yile "Ungayifaka njani ingcambu kwaye ufake kwakhona ukubuyiswa kweClockworkMod kwithebhu ye-Samsung Galaxy p1000" Andikwazi ukuphawula kweso sithuba andazi ukuba kutheni kodwa emva koko bendifuna ukulandela esi sifundo, UNCEDO BAHLOBO !!! !!!
Phendula u-MARIO SANCHEZ
UDiego alamilla sitsho
Molo, ndenza into enye, kodwa eyam ayikhanyisi ii-LEDs ukuba kukho into oyaziyo, nceda uphawule, ndikhathazekile!
Phendula u-Diego alamilla
Molo ndihlaziye ithebhulethi yam kwinguqulelo yamvanje njengoko ubutshilo kodwa ukuchukumisa okanye amaqhosha ayo akasebenzi xa ndingena kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kuphela umthamo kunye nezicoci ezisebenzayo !! Ndincede !!!
UManuel Santana sitsho
Andiqondi ukuba kutheni engenzi ividiyo ukuba ndiyayiqonda ngcono le nto
Phendula uManuel Santana
Isidre Pelayo sitsho
Sele iinyanga ezimbalwa oko ndiyenzileyo kwaye icwecwe liphumelele ngokungathandekiyo, ngoku ndiye ndathenga i-USB kunye nezihlanganisi ze-SD ukuze icwecwe sele ligqibelele, umntu angandixelela ukuba ndingayenza njani ukuba isebenze ngaphandle kokwenza ubunzima ubomi bam kakhulu ukusukela njengoko benditshilo ngoku ndenza kakuhle.
Phendula kwi-Isidre Pelayo
busuku obuhle ndinecwecwe lesamsung yp-g70 2.3.5 kwaye ndifuna ukuba ibeyi-4.0 yinkqubo efanayo nale ingentla
Akukho mhlobo hayi, i-terminal nganye ineendlela zayo ezahlukeneyo kunye neerom
Mholweni emini nje. Ndine-galaxi GT P6200L tab ndibonisa ingxaki. Undikhulule ngokupheleleyo. Ndiyekile ukuyisebenzisa malunga neentsuku ezili-15. Ngoku ndiqhagamshela itshaja kwaye ayenzi kwanto… ayivuli kwaye ayibonisi nantoni na kwiscreen… ..naluphi na uncedo. Enkosi.
VUMELA i-IT, iya kuvula ngokwayo, ihlala isenzeka.
UGerardo Martin sitsho
Isithuba esihle kakhulu nangona ukunqanda ukudideka kungangcono uye ngqo apha
kuba njengokuba u-10 sele eku-beta, banokudideka xa bekhuphela.
Isebenze ngokugqibeleleyo kum kodwa kuya kufuneka ukhuphele i-9 kunye neegapps ezibonakala kwikhonkco endizishiyayo
Phendula uGerardo Martin
Umfundisi waseCarlos sitsho
Molo, enkosi ngawo wonke umsebenzi owenzayo. Ndine-tab ye-samsung ye-p1000, yeza ne-froyo 2.2, ndayihlaziya kwi-gingerbread 2.3 emva koko kwi-jellybean 4.1. Yonke into igqibelele kodwa ndaye ndagqiba kwelokuba ndinamathele kwi-2.3, ndiye ndabuya ndalandela amanyathelo endiqhele ukuwahlaziya ukuya ku-2.3, ingxaki kukuba ngengozi ndazikhupha intambo kwaye ngoku ithebhulethi iyavela inomfanekiso wekhompyuter kunye neselfowuni kwaye embindini luphawu lwesilumkiso. Ukuba ungandinceda ngale nto kunokuba luncedo kakhulu. Enkosi
Phendula umfundisi kaCarlos
Ngo-Okthobha 21, 2012 11:06 AM, Disqus wabhala:
Hayi, kuvela imvelaphi emnyama kuphela, ngasekhohlo amanqaku amabini ahambelanayo kulayini, unxantathu wesilumkiso, amanye amanqaku amabini ngokulandelelana kunye nekhompyuter ngasekunene. Xa ndiyilayita ngokwesiqhelo okanye ndicofa naliphi na iqhosha levolumu + okanye - ndifumana okufanayo
Zama ukuya kwimowudi yokukhuphela, ethi ngamanye amaxesha ixabise kancinci, kwaye ukuba uyaphumelela, khanyisa i-rom yentsusa evela kwi-Odin.
Ukuba awuphumeleli, qhagamshela i-Tab kwi-pc njengoko unayo ngoku kunye nophawu lwekhompyuter, kwaye uzame ukuvuselela nge-Kies okanye ufumane kwakhona ikopi oyigcinileyo.
Molo, ndikwazile ukuqhagamshela ithebhulethi kwikhompyuter kunye ne-odin evulekileyo kwaye njengoko ufaka iwotshiUfakelo lweMod Qalisa ukwahlula kwakhona kwaye wenze i-PIT kunye ne-PDA isebenze kum kwaye i-PASS iyavela. Ngoku ndinemenyu
Ukubuyiswa kwenkqubo ye-Android
Ngena: Kulungile, Khetha: Vol UP / Vol Down
oku kuphuma ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka
csc: ukucima / inkqubo / csc
Ifakelwe ngempumelelo iphakheji.
Ukuhlaziya inkqubo yefayile ...
(ebomvu) E: ayiphumelelanga ukunyuka / i-dbdata (Impikiswano engavumelekanga)
E: ukulahla_filesystem_for_rfs: Ayikwazi ukunyuka / dbdata
Indawo yokusula ..
Ndiyila / cahe ...
(bomvu) Ukususwa kwe-Cache akuphumelelanga
E: ayiphumelelanga ukunyuka / idatha (impikiswano engavumelekanga)
E: ukufaka_application_for_customer: Ayikwazi ukunyuka / idatha
ukugcinwa kwakho akukalungiswa okwangoku, nceda sebenzisa imenyu ye-UI yefomathi kunye nokuqala kwakhona kwezenzo.
Ikopi yesicelo ayiphumelelanga.
Ukusetyenziswa kweMulti-CSC ...
Ukufaka iMultI-CSC ...
Ifake ikhowudi ye-CSC 'KOR'.
Isebenze ngempumelelo ii-CSC ezininzi.
Kuqale kwavela umbala omthubi nobomvu emva koko kwavela oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphezulu
konke oku kwiscreen esimnyama nge-android kunye nophawu lobungozi.
Emva kwayo yonke le nto ndiyikhuphileyo, lol, andazi ukuba ndenze ntoni ukunqanda ukuphinda ndiyonakalise. Ndisuse i-4.1 kuba bendingenakho ukufikelela kumdlalo kaGoogle nangona ndikhuphele i-blackmart kwaye ndikhuphele usetyenziso olunje. Xa ndingabeka u-2.3 kakuhle kuba yonke into ihamba kakuhle, kodwa ke ngo-4.1 ngokunjalo. Ndicebise ngento onokuyenza kwaye ndiyabulela ngokundinyamezela
Ndingenile odin kwaye ndilandele amanyathelo okufaka iwotsworkmod, iyajika, ilogo yakwaSamsung iyavela kwaye ndiyifaka kodwa ihlala imnyama. Ke ndiyikhuphele idatha kwi-sd ukufaka i-4.1, konke kulungile de kube yinyani ye-10 okoko xa uzama ukufaka i-gapps indinika impazamo yokuba ayinakuyivula kwaye ikhuphe ufakelo kwaye i-Android ibonakala ilele ngesiciko esivulekileyo kunye nobomvu phawula ingozi.
Molo, ndibuyisele yonke into kwakhona, ukusukela ngo-2.3, kwaye ngoku u-4.1 undisebenzele, ekuphela kwento endingakhange ndikwazi ukuyifaka i-gapps endinike impazamo, kodwa iyasebenza, enkosi.
Ndiyakuvuyela ukuba ndilandele isifundo sakho kubandakanya ukubuyiswa kweClockworkMod, ndikhuphele uguqulelo lwamva nje lwe-10 kubusuku nakweli phepha http://www.teamandroid.com/gapps/ Ndikhuphele uguqulelo lwamva nje lweJelly Bean 4.1.1 kunye neGPS Tab ye-P1000 yahlala njengenye imodeli ehlaziyiweyo esebenza nge-100%
Isilumkiso: Itekhnoloji ye-CDMA yeyamazwe athile eSpain yi-GSM
Ndilandele zonke izikhombisi zolu ngeniso kunye nolunye oludlulileyo olunxulumene (https://www.androidsis.com/como-rootear-e-instalar-el-clockworkmod-recovery-en-la-samsung-galaxy-tab-p1000/) kwaye isebenza ngaphandle kweengxaki ezibonakalayo kwi-Galaxy TAB GT-P1000 GSM.
Khange ndiyifumane okokuqala kwaye emva kovavanyo olufanelekileyo la ngamava am:
Inqaku lokuqala livela ngoJuni 1 kwaye ukusukela ngoko eCyanogen amarhe sele ehlaziyiwe ukuze ikhonkco likhokele kwi-CM2012 endaweni ye-CM10.
2.- Ukuba i-CM10 ikhutshiwe, ingxelo ye-gapps efunekayo ayisiyiyo ikhonkco kweli nqaku (itsho kwelinye lamagqabaza, kodwa andikhange ndihoye kakhulu). Kwi-CM10 banokufumaneka apha:
Ukuba ngempazamo okanye ngokungxama, njengoko bekunjalo kwimeko yam, ufaka uhlobo lwe-gapps ye-CM10 kwi-CM9 nje ukuba uyiqale, iya kunika impazamo kwikhibhodi.
3.- Ukuba into enje yenzekile kuwe, kuya kufuneka uphinde amanyathelo onke ala manqaku mabini, eli kunye nelinye lokufaka i-clockworkmodrecovery. Ndizamile ii-ROMs ezininzi kunye ne-gapps ngaphandle kokwenza kwaye nangona ikhibhodi kunye nazo zonke ezinye izicelo zisebenza, ayikhange ibone isim khadi yefowuni okanye i-wifi de ndaphinda "ndakhanyisa" i-kernel kwakhona.
4.- Ukulandela onke amanyathelo kunye nokukhetha uhlobo oluchanekileyo lwee-gapps, yonke into ihambe kakuhle.
5.- Sele ikho ingxelo ezinzileyo ye-CM9 ekufuneka isebenze, kodwa ndiyifakile i-CM10 ngobusuku bonke ukusuka nge-17 ka-Okthobha ka-2012 nanjenge-gapps ukusukela nge-26 kaJulayi ka-2012.
6.- Enkosi kumbhali ngexesha lakhe kunye nokusebenziseka kweli nqaku.
UMaria Gar sitsho
Ewe ukuyenza ngoluhlobo kusebenza ngokugqibeleleyo.
Enkosi kakhulu kubo bonke.
Phendula uMaria Gar
Emva kweveki ndisebenza kakuhle, ngoku kuvela ukuba iSIM ayindiboni
Kwaye andinakutshintsha imisebenzi, kuya kufuneka ndivale isicelo sangoku ukuze ndikwazi ukuvula enye
into ekufuneka uyenzile yile
Molweni bahlobo, isifundo silungile kwaye izimvo zabanye abasebenzisi zinceda "kakhulu" njengoko besitsho edolophini yam, enkosi nonke.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingayifumana phi i-Gapp 4.1
Ukhuphelo lweGoo.im -Khangela iapps
Ximo Gil sitsho
Xa ndisiya kulayisha i-zip yokuqala ye-rom indixelela "ukusilela ukuqinisekisa utyikityo lwefayile epheleleyo" kunye "nokuqinisekiswa kokutyikitya kusilele". Enkosi.
Umahluko kuphela kukuba kwinqanaba 2- Sula isahlulelo se-cache, akusekho menyu ingaphambili, indixelela nje "Chache sula igqityiwe".
Ndiyathemba ukuba uncedo lwakho.
Phendula uXimo Gil
Molo ngokuhlwa okuhle, ndinengxaki elandelayo. (Ndine-p1000N tab) ndizamile ukuyivuselela isuka kwi-Samsung Kies ukuze inyuke isuka kwi-2.2 iye kwi-2.3.6 kwaye yahlala ibambekile imini yonke zombini (ukusuka ngo-2pm ukuya ku-8pm) ngo-97% kwaye imo yokukhuphela nayo yanamathela Ndiyicimile, ndiyicimile, kwaye ngoku andinako nokungena kwimowudi yokukhuphela, uphawu lweselfowuni luyavela kwiscreen, amanqaku amathathu unxantathu emva koko ikhompyuter NGOKUPHELELEYO NCEDA UNCEDE AAAA….
isebenza kwithebhu yeGPS 7 ″ yemodeli yeGT-P1010
Imibuzo okanye iimpendulo?
Kwaye sele ndibekile abaqhubi kwifayile yomqhubi we-samsung, ukusuka kwi-kies, kwi-zadig yabo bonke abaqhubi, vula yonke into kuqala kwaye uzame ngokuthe ngqo nge-zadig kwaye akukho nto ayisebenzi kwempazamo efanayo ye-libusb -12
Ndineentsuku ezi-5 ndifuna ukuvuselela kwi-4.1. Isamsgun galaxy tab yam p1000n kwaye akukho nto iyincedayo
Ingaba ihamba njani? Pz ukuba into oyifunayo kukwazi i-galxy yakho kwi-pc. Zama oku ... Yiya kwipaneli yokulawula, emva koko izixhobo kunye neeprinta. Ufumana isixhobo samsung. Cofa ekunene kunye nepropathi, emva koko ukhethe ithebhu yesibini kwaye ucofe uhlaziyo lomqhubi, iya kubuza ukuba uyafuna na, ngokuzenzekelayo uyinike ewe, linda uhambe, kufuneka isebenze.
Ilungele ulwazi kodwa bendisele ndilisombulule kodwa enkosi sele ndinetab 7 yam ene-Android 4.1
Ndiyabulela kwesi sifundo, ndinegumbi 4.1.2 ukusukela ngo-20121031 kwithebhulethi yam. Yonke into igqibelele: Ikhamera, ikhibhodi, unxibelelwano lwe3g ...
Ndinengxaki enye kuphela kwaye yile yokuba ndiphulukene ne-anchor yenethiwekhi. Inethiwekhi ibonakala ngathi yenziwe kodwa akukho ndlela yokunxibelelana, ndixhuma kuphela xa ndiyishiya ivulekile kodwa kule meko akukho dluliso lwedatha kwaye xa ndiyisusayo kufuneka ndivale idatha kwaye ndiphinde ndiyivule kuba neTablet ngokwayo iyadibanisa.
Ndizamile i-WiFi Tether v3.2-beta2 abathi bayayilungisa kodwa kwenzeka into efanayo kum.
Ngaba kukho ukuthobela?
Molo, okokuqala, ndiyabulela ngesi sifundo sikhulu (Ndilandele eyangaphambili ngoku ukubona ukuba andizukuyisa na kwi-4)
Inyani yile yokuba ndingathanda ukubuza ukuba umntu uyakwazi na ukutshintsha ubungakanani befonti, ndifumana ifonti enkulu kodwa kwi-app enjenge-facebook kwaye phantse zonke ezinye
Masibone ukuba ukhona umntu ondincedayo
Izinto zobugcisa sitsho
Molo uFrancisco, ndivela eChile kwaye bendikhangela uhlaziyo lwetafile yam ye-GP-1000L ye-GSM unyaka wonke, kodwa apha khange bayikhuphe iGingerbread, yiFroyo nje. Ungandixelela ukuba olu hlaziyo luvumela zonke izixhobo zokusebenza ukuba zisebenze, kubandakanya i-analog kunye ne-TV yedijithali?
Ngaba unayo nayiphi na indlela, ukuba kukho into engahambanga kakuhle kwaye ubuyise i-firmware eza ngokungagqibekanga?
Ndiyazibulela iimpendulo zakho.
Molo zinjani izinto. Igama lam ndinguSantiago, ndiseUruguay kwaye ndine-Samsung Galaxy Tab GT-P1000L. Ndizifundile zonke izimvo ezithunyelweyo kwaye andikaboni mpendulo okanye ubungqina malunga nento endinomdla wokwazi. Ezi tutorials ziyandinceda ukuhlaziya iThebhulethi yam ukuya kwi-Android 4?
Ewe ukusukela ngoku enkosi kakhulu.
U-Erick baltodano sitsho
Ndinayo ithebhu yegalasi 2 7 «gt-p3110 kwaye kwiintsuku ezimbalwa i-wifi iyekile ukusebenza, ndaphuma kuluhlu kwaye i-IP ayinayo andazi ukuba ndinantoni xa umntu enokundinceda nceda ubhalele imeyile yam erik_baltodano@hotmail.com Ndingavuya kakhulu
Phendula u-Erick baltodano
Molo, ndivela eArgentina kwaye ndathenga i-Samsung Tab 2 kuhambo lwam lokuya eMexico. Ngaba uyazi ukuba kutheni ndingasebenzisi ivenkile yokudlala kaGoogle? indixelela ukuba kufuneka ndingene kwiakhawunti kugoogle. Enkosi!
Phendula ku Carlonchi_19
Kuya kufuneka ubeke iakhawunti ye-gmail eya kuthi isetyenziselwe ukungqamanisa usetyenziso lwakho olukhutshelweyo
Nge-17/11/2012 ngo-21: 47, «Disqus» wabhala:
Mholweni. Emva kokulandela amanyathelo ayijiki kwithebhu yam ye-galaxy okanye kwimowudi yokukhuphela. Ndingenza ntoni? Nceda !!!
Ukugqibelela, yonke into iyasebenza, kwaye ithathela ingqalelo iinkcukacha ze-hyacinth. Eyona nto imangalisayo (isusa uhlobo lokutsiba njalo njalo) ... imigqomo ... andiyikholelwa inyani.
Ndiyifumana phi i-firmware ye-P1000L?
UMiguel Monreal sitsho
UFrancisco, ngaphandle kokuba ngumsebenzisi wengcambu yokufaka i-cyanogenMod9 kunye ne-gapps ene-Odin 3 1.7
kwithebhulethi yomthala P1000L? Ngenxa yokuba umsebenzisi wengcambu wayengandisebenzelanga, ndigcina ikhusi limnyama kwaye ndafaka kwakhona i-Android 2.3.3, ndilibale ukukuxelela ukuba ndingu-newbie oneminyaka engama-67 ubudala.
Enkosi kakhulu kwangaphambili ngeminikelo yakho esazisa ngezinto ezininzi uninzi lwethu olungazihoyiyo.
Phendula uMiguel Monreal
Akukho nto ixabisa imodeli yethebhulethi yakho, i-P-1000L yenye yazo ekunokwenzeka ukuba ungafumani nto
Nge-26 kaNovemba ngo-2012 ngo-20: 54 kusasa, uDisqus wabhala:
Enkosi nangoku; Ndinayo le imeyile ndiyincamathisileyo kwaye undixelele nceda ukuba ilungile
UDaniel Rodriguez wabhala:
KWABASEBENZISI be-P1000L ... ngelixa usenokwakha i-HumberOS rom ephekiweyo, kucetyiswa kakhulu (ubuncinci ndikwazile ukuzama i-CM10 ye-P1000N kunye ne-funka kwi-99.999%, kukho iinkcukacha ezincinci kakhulu endizifumeneyo ukuba kufuneka sixelele umphuhlisi waseBrazil ) Kuye kwafuneka ndonakalise ithebhulethi yam ukuze ndibone i-CM10 isebenza komnye umntu, kwaye ndiyabulela ukulunga kuba andinakukuthwala ukuthotywa kakhulu kangangokuba izinto zingaphinde ziphume njengezifundo ze-intanethi zehehehe, zigcina kuphela i-zip ye-CM10 ( I-biuld yokugqibela iqala nge-18-11-2012 kwaye yonke into iyandisebenzela kwithebhu yabanye abantu ngelishwa lol) kwaye i-GAPPS ifaka i-CWM ekhonza i-P1000L (nabani na osebenzela yona kwaye angaziphosi iimpazamo), bangena ekubuyiseleni , I-JAMAAAASSS ILIBALELE UKWENZA IBHASIKO LE-NANDROID BACKUP (eyam ikwinkonzo yezobuchwephesha yokutsiba eli nyathelo ukubuyisa i-imei kunye nokuzama ukusombulula iingxaki ze-boot), sula idatha / ukuseta kwakhona kwefektri, susa i-cache, faka kwi-Sdard yangaphakathi; I-CM10 Kuqala kunye ne-GAPPS, inkqubo ye-rebbot ngoku. Yonke into ikwiwebhusayithi yakho: http://www.humberos.com.br/
Kubo bonke abo bane-P1000L kwaye abangakhange bafumane mpendulo kule forum, ndiyakumema ukuba ujonge kwiYouTube yeXbakulive360380 enezifundo ezigqwesileyo kwimodeli yethu, sele ndinayo iTab yam eneCyanogenmod10 esebenza ngokumangalisayo. Ukubulisa
Ndiyabulisa mfondini ndingathanda ukwazi ukuba iyinyani na itafile ye-samsung 2 7 unganika umqondiso we-intanethi kwabanye abantu kuba ngokoko ndivile kwaye ukuba unokukhuphela i-skype nayo kuba ndiza kuyithenga nceda uphendule kwi-imeyile yam renejesus_avila@hotmail.com Ndiyabulela kwangoko
Ndiyabulisa ngombuzo kuyinyani ukuba ngetafile yesamsung 2 7 Ndinganika i-intanethi kwabanye abantu
Ndine-Latin American version (eneTV) kwaye kuvela ukuba le nguqulo ye-Android iyawurhoxisa lo msebenzi 🙁
molo, ndifake i-4.1.2 kwaye yonke into isebenze ngokugqibeleleyo kwintsuku ezimbini ezidlulileyo bendinengxaki yokudlala kuGoogle kwaye ngoku andinakukhuphela nantoni na okanye uhlaziyo. Inginika umyalezo wemposiso engama-492.Ndicime i-cache kwaye ndasusa uhlaziyo. Ndiyibuyisele kwakhona i-gapps ukusuka kwinqanaba le-10 kodwa ihlala injalo. Enkosi
Ideskonosido J Tg sitsho
kungekudala iifayile ezi-2 ze-zip aziqondi
Phendula ku Deskonosido J Tg
Molo ndinemodeli yethebhulethi gt p3110 kwaye isandi sahamba kwaye isantya seevidiyo sicotha kakhulu ndiyiphindaphinda ngentsholongwane kwaye yayingeyiyo loo nto, ungandinceda nceda
Molo, enkosi ngomsebenzi wakho. Ndingathanda ukukubuza umbuzo: Ngaba inokuhlaziywa ukusuka kwi-Gingerbred 2.3.3 njengokuba kunjalo, namhlanje kuyimfuneko ukwenza uhlaziyo oluphakathi?
Molo uFrancisco, ndiyifakile yonke into egqibeleleyo kulandela incwadana yakho kwi-GT-P1000 yam ngomnxeba nayo yonke into, ngokugqibeleleyo ndibeke uguqulelo cm-10-20121209-NIGHTLY-p1 kwaye yonke into ibimnandi, kuphela kukuba ndinempazamo ngalo lonke ixesha iselfowuni endixelela »ISICELO SEBHODI YEBHODI SIMILE
Kwaye ayizukundivumela ndiyisebenzise, ​​ndingayilungisa njani?
Enkosi ngomsebenzi wakho omkhulu, i-slaudosss
Molo, igumbi elilungileyo, kodwa ngalo mzuzu we-aztualizar ndijijekile andazi ukuba kwenzeka ntoni xa ndifumana ipetada keda ndifumana unodoli wecynogen kunye neai keda
Molo, uhlaziyo kwi-Android 4 lusebenze kakuhle kakhulu kum. kodwa ngoku ifowuni yam ayisebenzi (iingxaki nge-IMEI). Ndibonile ukuba bekufanele ukuba ndiyayixhasa ifolda.
Enkosi ngesi sifundo simnandi.
Andililo ingcali kwaye ndikwazile ukwenza utshintsho ku-4.0.4 njengoko kubonisiwe kumfanekiso wokugqibela.
Inye kuphela ingxaki kwaye yile xa ndikhangela iinethiwekhi ezikhoyo ze-Wi-Fi, ezo zommandla wonke ziyavela ngaphandle kwezam.
Ndinezinye izixhobo eziqhagamshelwe kule nethiwekhi kwaye zilungile. Nokuba ndibuyisela i-Galaxy kuhlobo lwe-2.3.3 okanye i-2.3.6 bayayiqonda kodwa kukubeka le cyanogen yokugqibela kwaye ndiyeke ukubona inethiwekhi.
Ndizamile ukuqhagamshela nge-3G ukufumana ezinye izinto eziluncedo kodwa ayindivumeli ukuba ndisebenzise ikhadi xa ndiqala kwakhona ithebhulethi, icela ipini kwaye nangona ndiyibeka ngokuchanekileyo ayiboni khadi.
Ndikwazile ukuqhagamshela kwi-ono wifi yasimahla kodwa oku kubi kakhulu kwaye ukugubungela kubi kakhulu.
Enkosi kwakhona ngoncedo lwakho.
Kwenzeka into efanayo nakum. Ngaba usifumene isisombululo?
Ndibonelela ngenkonzo yobuchwephesha kwaye itafile ayinakuhlaziywa, nceda undicacisele ngcono
Phendula kwi ranyer
Ngaba ungatsho ukuba ungayifumana phi i-firmware ye-GT p1000L kuba ayifani nokusebenzisa i-GT p1000 ukuya kwi-GT p1000L kuba ndandikhe ndasebenzisa i-p1000 kwisixhobo sam se-GT P1000l kwaye yabangela ukuba icwecwe lam lingaphenduli kwiscreen sokuchukumisa
Amaqhosha "abuyayo" "ekhaya" njl. ngoku ayavela kwiscreen? .. uthini ngochukumiso kodwa amaqhosha "omzimba" asezantsi kwesakhelo sesikrini?
Molo, okwesibini kodwa ndihlaziye i-tablet yam. Enkosi kakhulu, eskerrik asko.
Yeyiphi ingxelo ye-GAPPS esetyenziselwa i-CM-10-20130103-NIGTLY
Molweni nonke, ndiyifakile i-CM9 kuba izinzile, kwaye ndineengxaki ezi-2, enye kukuba andinakukwazi ukwenza i-APN, kwaye eyesibini kukuba xa uzama ukumisela i-WhatsApp, indixelela ukuba abaxhasi le nguqulo kwaye ayishiywanga ukuba iqwalaselwe. Ngaba ukhona umntu okhe wanazo ezi ngxaki? Le yiGalaxy Tab P1000
Ndinombuzo. Oku kuvakala kuyinto entle kodwa kwimodeli ye-GT-P1000L, akukho kukhuphela okanye inqaku oya kulifumana. Kwaye ukuba ikhona, ndiphanda apho ndafumanisa ukuba umabonwakude awusebenzi kwi-Ice Cream Sandwich. Ukuba oku akwenzeki apha; Nceda undilungise kwaye undibonise.
Umntu othile undincede ngekhonkco (apho lisebenzela i-p1000L, kwaye usebenzise iTV)….
UAlejandro Guzman sitsho
Mholo! Ngaba unganceda uhlaziye amakhonkco okhuphelo, ngakumbi enye ye-firmware. Enkosi!
Phendula kuAlejandro Guzman
Molo, ingaba iyasebenza kuhlobo lwe-gt-p1000n? Ndimtsha kule nto malunga neepilisi kwaye andifuni ukwenza into engalunganga.
Okufanayo kunokwenziwa nge-ssmsung galaxy tab. 10.1
Mholweni. Ndiyenzile yonke inkqubo ngokuchanekileyo kwaye kubonakala ngathi ihambe kakuhle, nangona kunjalo ndinika kwakhona i-sytem ngoku kwaye xa uqala kwakhona ubuyela kwimowudi yokubuyisela, andinakho ukuyifumana ukuba iqalise ngesiqhelo. Naziphi na izimvo?
Yenza indawo ekhanyayo yerey kwakhona, ukusuka Faka i-zip kwi-sdcard
UDIANA MARTINEZ sitsho
Molo NCEDA .. NGOKU NGXAMISEKO, NGABA UYAYAZI INDLELA YOKULUNGISA I-GALAXY TAB GT-P100 ETSHAYINA, EFIHLEKILEYO KWISIKRAYI SASEKHAYA SE-ANDROID .. ENKOSI.
Phendula u-DIANA MARTINEZ
Xa ndifaka i-gapps404, ikhibhodi iyaphazamiseka kwaye ndifumana umyalezo: Ngelishwa, isicelo sekhibhodi siyekile.
Mhlobo wam, eyam yi-Wi-Fi GT-P1010, ucinga ukuba iyasebenza?
Ungaze ucinge ngokuzama
Nge-14/02/2013 ngo-05: 36, «Disqus» wabhala:
UJasinto, enkosi ngegalelo lakho, ndiza kuzama, ndiyathemba ukuba iyandisebenzela.
Ndiyabulisa bahlobo ingxaki yam ngale rom kukuba ayihambi kakuhle de ezinye zeemovie endandikhe ndazidlalela ngeslow motion, ndenze ntoni embi ???? Kwelinye icala, uhlaziyo oluye kwi-2,3,6 G lwalahleka iphakheji yiyo loo nto ikhibhodi iphendule kuphela ngokungacacanga kwaye ijonge ifayile ebilahlekile kuhlobo lwe-2,3,3 Ginger ,,, faka iyasebenza kum njengemaraaas, ndicela kulungile. Kuko konke, enkosi
umhlobo oku kusebenzela i-gt-p1000n gingerbread.ubjp7 firmware version 2.3.3 ???
Molo mhlobo, igalelo elihle kakhulu, ndiyakuthanda ukuvuyisana nawe, ungayenza kwakhona i-samsung p1000L
UMisael Valderrama sitsho
Ngaba olu hlaziyo luyasazi isixhobo seTV?
Phendula uMisael Valderrama
Olu hlaziyo lungep1000
Umthala endinawo yi-p1000 kwaye uza nesixhobo seTV. Umbuzo ngulo, uyawuqonda? Hayi okanye ewe?
molo enkosi ngomsebenzi,
, iyasilela ukulayisha kwaye ithi akukho keyboard, kukusilela ukulayisha ii -apps ze-android
Molo, umntu onokuthi andincede, afake i-rom kwithebhulethi yam kwaye ihlala ifakiwe kodwa amaqhosha asebenzayo kwiphepha lasekhaya awasebenzi.
UEmmanuel rodriguez sitsho
Molo uFrancisco ndizithandile izimvo zakho nento oyipapashileyo kodwa ngempazamo nobugwenxa bam ndishiye ithebhulethi ezandleni zomhlobo ebefuna ukwazi ukuba uzoyihlaziya njani kodwa ngoku ndizifumana ndinengxaki ethi xa ndivula isibane imenyu yasemva ekhaya kunye nokhangelo kodwa isikrini sihamba mnyama
Ndingenza ntoni kule meko? Ndingavuya kakhulu ukuba ungandixelela nto
Phendula uEmmanuel Rodriguez
UJuan Manuel Sanchez Valero sitsho
Tuto olungileyo, uFrancisco, kodwa kwavela ingxaki, ukugcwala kwedatha kwikhadi le-sim akulunganga, yiza, andinayo i-intanethi ngaphandle kokuba ndine-Wi-Fi kufutshane. Masibone ukuba ungandinika na isandla, kuba uyazi ngale nto.
Ndilindele ukubalisa kwakho. Imibuliso evela kuJuan Manuel
Phendula uJuan Manuel Sanchez Valero
Ukuba ukhuphela i-10.1, uya kufumana i-gapps oyifunayo apha. Ndizikhuphele nje kwaye ndilandela amanyathelo asixelelwa nguFrancisco Ruiz apha ngasentla, ndiyakuqinisekisa ukuba i-Tab p1000 yakho iza kusebenza ngokugqibeleleyo njengoko isebenza kum.
Ikhonkco le-gapps yile:
Imibuliso kunye neethebhulethi entsha yeminyaka emibini.
Ingcebiso yokwenza ukhuphelo lwayo yonke into ethi kamva ingagcini idatha.
Molo, enkosi kufundiso. Ndimtsha kakhulu kule nto kwaye andiqondi okuninzi kodwa ndinomdla wokufunda. Ndine-P1000N, ene-firmware 2.2.1, ithi yi-Baseband Version P1000NUBJM2, Kernel Version 2.6.32.9 se.infra@SEP-40#1, kunye nenombolo FROYO.UBJM8. Ndingathanda ukuyivuselela, kodwa andikhange ndibenesibindi sokwenza isifundo ngaphandle kokukhokelwa kancinci. Andinakuyenza? Enkosi!!!
UJuan Galan sitsho
Molo uFrancisco, Enkosi ngokufaka, ndiyinyani ngokunyanisekileyo kwiibhodi ze-Samgsum kwaye andazi kangako ngayo. Ndingathanda ukwazi oku kulandelayo.
Ndine 7 model imodeli yethebhu ye-Samsung ye-GT-P1000M ene-Kernel Version 2.6.32.9 software kwaye ndingathanda izinto ezimbini:
Hlaziya inkqubo ukuya kuthi ga kwitafile inokuyixhasa.
kwaye Beka inkqubo ngeSpanish okoko ndize ngesiNgesi kwaye andiboni ukuba ndenze ntoni na okanye kufuneka ndikhuphele into. Le tafile ivela kwi-GSM enye.
Andazi ukuba yonke le nto uyichazayo yenzelwe ibhodi yam, andifuni ukuyimosha.
Phendula uJuan Galan
UMauricio Guerrero sitsho
Uncedo ndizamile ukuvuselela i-galaxy tab 7 P1000n kodwa ngoku ihlala eSamsung kwaye ayiqali ukusuka apho njengoko ndisenza ukuseta kwakhona nzima ukusukela ngoku amaqhosha asekhaya awasebenzi, kwaye macala onke ... enkosi kakhulu kwangaphambili ndifuna uncedo lwakhoaaa.. :: :: »(
UMaria Garcia sitsho
Ndingayitshintsha njani iakhawunti kaGoogle emva kokuba idatha yomzi mveliso ibuyisiwe? Ekuqaleni wandibuza. Kodwa andiyibekanga (yeyomnye umntu) kwaye ngoku andifumani menyu apho ndingayenza khona.
Phendula uMaría García
Ndingamtshintsha njani umsebenzisi we-gmail onxulumene nesixhobo? Andiyifumani naphi na kwimenyu.
Ndiyibuyisile idatha yefektri kwaye xa ndiqala kwakhona umsebenzisi wandibuza. Kodwa kuba bendingazi, khange ndiyibeke kwaye andikwazi. Nokuba ukuqala kwakhona kwakhona.
Yenza useto lwefektri kwaye ufake umsebenzisi ofuna ukusula idatha yokuseta kwakhona kumzi-mveliso
molo ungayifaka le software x odin ???
oscar sanchez solano sitsho
Uxolo ndizamile ukubuyela kuhlobo 4.2 kule kodwa ndicinga ukuba ndiziqinisile kwaye andisazivumeli ukuba ndifake nantoni na, ihlala kwimenyu yento ofuna ukuyenza kwaye inika kuphela ukhetho lweengcambu kwaye ukusuka apho akwenzeki
Phendula u-oscar sanchez solano
Iscreen sam sinqabile kwithayile yegalaksi samsung SOLUTION NCEDA
molo, ndinengxaki encinci, ndilwenzile lonke ufakelo phantse amaxesha ama-2, buyela ku-2.3.3. kwaye uphinde ufake yonke into kwakhona, xa ubusuku buphela, kwaye ndiqala ithebhulethi, i-cyanogenMod loo ivela ngokulayishwa kwesangqa kodwa i-Android ayiqali. ingaba lo nto yenzeke komnye umntu? Andazi ukuba ndenzeni ukuze uyiqale !!!
Molo, ndinengxaki kwithebhulethi yam engaliboniyo ikhadi kwaye ndiye evenkileni ayilo khadi, ungandinceda ukuyilungisa? Kwinkonzo yobuchwephesha yakwaSamsung bakubiza imali eninzi ngesikere okanye nge-100 ufuna nje ukuba uthenge entsha kwaye ndifuna eyam.
UPablo Sotelo sitsho
Molo Francisco, ndinepilisi ye-P1000N enedatha elandelayo kwaye ndifuna ukuyisusa kuba uninzi losetyenziso aluhambelani nohlobo lwam lwe-android.
Inguqulelo yeFirmware: 2.2.1
Inguqulelo ye-baseband: P1000NUBJM2
Inguqulelo yeKernel: 2.6.32.9 se.infra@sep-40 # 1
Inombolo yokwakha: FROYO.UBJM8
Ngaba esi sifundo siluncedo kum? kwaye enye into, kwiifayile zokukhuphela, kwi-GSM, indivumela kuphela ukuba ndikhuphele ikhonkco lesibini, kuba eyokuqala ibonakala yaphukile okanye ayikho.
Phendula Pablo Sotelo
patricia acosta hernandez sitsho
Olu ngxamiseko, ithebhulethi yam ye-Samsung icinyiwe ngequbuliso kwaye ayisebenzi kwakhona.
Phendula patricia acosta hernandez
Molo, ndinetafile yesamsung ye-intshi ezi-4. Ndidinga ukwazi ukuba ndingayisebenzisa njengefowuni okanye ndibeke imicchip kuyo, ndingakwazi okanye hayi ???? Kwaye ungayifumana kanjani i-whatsapp ukusukela kwivenkile yokudlala xa uyifaka ithi ayingqinelani isixhobo. Enkosi kakhulu, ndijonge phambili ekuphenduleni ngokukhawuleza